राणा भर्सेज पूर्व डिआइजी सिलवाल, कसको सम्भावना बढी ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
राणा भर्सेज पूर्व डिआइजी सिलवाल, कसको सम्भावना बढी ?
१ मंसिर, ललितपुर । मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको उम्मेदवारीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ अहिले चर्चामा रहेको छ ।
युवा नेताको अग्रपंक्तिमा परिचित राणा काँग्रेसका महासमिति सदस्य एवं नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षको कार्यभारसमेत सम्हालीसकेका छन ।
शालिन तथा नम्र भाषाका धनी राणाले आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै जनमानसबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनको साथ पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
विसं २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जसरी काँग्रेसको पक्षमा जनताले साथ दिएर विजयी गराएका थियो त्यसरी नै मंसिरमा हुन लागेको चुनावमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले साथ पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए ।
बहुचर्चित कान्तिलोकपथ सडक निर्माण तीव्र गतिले हुनुमा काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको र त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्र विकासमा थप टेवा पुगेको बताउँदै उनले उक्त सडक काठमाडौंबाट छोटो दुरीमा हेटौंडासम्म पुग्ने सडकको रुपमा परिचित रहेको छ, सो सडक आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी वाम गठबन्धनबाट मैदानमा उत्रिएका प्रहरीका प्रहरी पूर्व नायब महानिरीक्षक सिलवालले यस क्षेत्रको समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि काम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सो क्षेत्रमा एउटा गोदावरी नगरपालिका र वाग्मती, महांकाल तथा कोञ्ज्योसोम गरेर तीनवटा गाउँपालिका छन् । कूल ६५ हजार ९१८ मतदाता रहेका यस क्षेत्रमा पर्ने प्रदेश(क) मा ३२ हजार ८३२ र प्रदेश(ख) मा ३३ हजार ८६ मतदाता छन् । रासस
PreviousGachchhadar hints at electoral alliance among NC, FSF and RJPN
Nextपशुपतिमा आज जे देखियो (२० तस्विरमा)